दंगीशरणले बाल दिवश मनायो - EAAWAJ (इ-आवाज)
दंगीशरणले बाल दिवश मनायो
दंगीशरण गाउँपालिका प्रा.वि. स्तरीय अन्तर विद्यालय हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा लक्ष्मी नारायण मन्दिर प्रथम हुन सफल भएको छ ।
राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसर पारी आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा वडा न. ५ मा रहेको सो बिद्यालय प्रथम हुन सफल भएको हो । यसैगरि विरेन्द्र मा.वि.हेकुली द्धितीय र आधारभुत विद्यालय पदमपुर तृतीय हुन सफल भए भने ज्ञानज्योती प्रा.वि. सान्त्वना हुन सफल भएको थियो ।
प्रतियोगितामा उत्कृष्ट हुन सफल भएका बिद्यार्थीहरुलाई कापी , कलम र प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको थियो । राष्ट्रिय बाल दिवस २०७६ कोे अवसरमा आयोजित हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा तथा एसईई उत्कृष्ट सम्मान कार्यक्रममा वडा न. ५ का दलित, जनजाती र विपन्न छात्र छात्रालाई २०७५ सालको एसईई परिक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याई उतीर्ण हुन सफल भएको भन्दै नगद सहित प्रमाण पत्रले सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा विपन्न तर्फ सनम आचार्य, दलीत सन्जु वि.क., जनजाती सुदर्शन चौधरी र महिला बाट माया चौधरीलाई सम्मान गरिएको हो ।
सुनिश्चित बाल अधिकार,समउद्ध नेपालको आधार भन्ने मुल नाराका साथ वडा न. ५ ले हाजीरी जवाफ प्रतियोगिता आयोजना गरि बाल दिवश मनाएको हो । प्रतियोगितामा दंगीशरण भित्रका ९ वटा सामुदायीक विद्यालयका प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरुको सहभागिता रहेको थियो । सो अवसरमा बोल्दै शिक्षा शाखा प्रमूख विनोद अधिकारीले बाल दिवशलाई अव शिक्षा संग जोडिएर लैजानुपर्ने बताए ।
हरेक बालबालीकालाई प्राविधीक शिक्षाको आवश्यक्ता छ भन्दै उनले कुनै पनि बालबालीकालाई कक्षा भित्रको कितावमा मात्र सिमीत गराउँन नहुने बताए । अवको शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप फरक तरीकाको हुनुपर्ने उनको तर्क थियो । यस्तै वडा न. ५ का अध्यक्ष दिपक गौतमले दंगीशरण गाउँपालिका भित्रका सामुदायीक विद्यालयहरुको शैक्षीक क्रियाकलाप बालबालीकाको चौतर्फि विकाश हुनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
शिक्षामा फड्को मानु भनेको दंगीशरण शिक्षीत हुनु हो भन्दै शिक्षक र बिद्यार्थीहरुको सम्बन्धमा सुधार आउँनु पर्ने बताए । कार्यक्रमको शहजीकरण प्रविण योगीले गरेका थिए ।
← प्रतिनिधिसभाको बैठक कांग्रेस बाँकेद्धारा अवरुद्ध
बैतडीमा एक जना सुत्केरी महिलाको मृत्यु →